DHAGEYSO: Abaaro ba’an oo dhibaato xooggan ku haya gobolka Gedo, & Xoolo dhaqatadii oo xaalad adag ku sugan | HalQaran.com
Dalal ay ku jirto Soomaaliya oo 5 Bilyan oo Dollar loogu deeqay
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Abaaro ba’an oo dhibaato xooggan ku haya gobolka Gedo, & Xoolo...
DHAGEYSO: Abaaro ba’an oo dhibaato xooggan ku haya gobolka Gedo, & Xoolo dhaqatadii oo xaalad adag ku sugan
Abaaraha ka jira qeybo ka mid ah gobollada dalka oo ay xoolihii u le'deen.
Abaaraha ka jira qeybo ka mid ah gobollada dalka oo ay xoolihii u le’deen.
Gedo (Halqaran.com) – Abaar ba’an oo xilligan ka taagan dhulka baadiyaha gobolka Gedo ayaa saameysay daaqa, deegaanka iyo dadkaba.
Boqolaal Xoolo dhaqato ah ayaa wajahaya xaalado macluul iyo abaaro darran, ayadoo kaliisha ay hor leedahay.
Ma jirto illaa iyo haatan cid gargaar geysey gobolka, ayadoo dhibaatada abaaraha ay ku darmeen isgaarsiinta meelaha qaarkood oo waxyeelo ba’an ay soo gaartey markii Ciidmada Kenya ay beegsadeen dhowr barood oo ah kuwa shirkada Hormuud ee ku yaalla deegaanada xuduudda Kenya ku teedsan.
Sidoo kale, abaaraha ayaa ka jiran deegaano kale oo ka mid ah Soomaaliya, sida ay dhowaan sheegeen mas’uulyiin ka tirsan Urur Gobboleedka IGAD oo ku shiray Nairobi.
Warbixinta IGAD ayaa lagu sheegay in 2 million oo qof oo ku nool Soomaaliya ay wajahayaan xaalado nololeed oo adag oo abaarta ay horseedday.
Halka hoos ka dhageyso CODKA:
macluul u dhammaaday
Xoolo u Le'day